Abuurista muusig cusub oo leh sirdoon macmal ah 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sirdoonka macmalka ah, hadda, wuxuu aad uga fog yahay tijaabooyinka runtiina wuxuu qabanayaa mashaariic badan iyo codsiyo wax ku ool ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa curiya muusikada wax badan ayey iska beddelayaan, sidaa darteed xitaa kuwa aan aqoonta u lahayn aaladaha muusikada ama khibrad u leh heesaha ay wali baashaal ku sii deyn karaan oo ay soo bandhigi karaan mala-awaalkooda. Sirdoonka macmalka ah ee lagu dabaqo muusikada wuxuu ku shaqeeyaa algorithm kaas oo, isagoo baaraya tiro badan oo duubitaan ah, wuxuu maareeyaa inuu si otomaatig ah u abuuro halabuur muusiko cusub oo gaar ah. Algorithm wuxuu isku daraa lakabyo dhawaaqyo lagu sameeyay wareegyo, oo leh khadad kala duwan oo loogu talagalay qalab kasta oo muusiko ah.
Dhowr baa jira codsiyada websaydhka ah ee lagu tijaabinayo jiilka muusikada iyadoo la adeegsanayo sirdoonka farsamada taas oo markaa loo isticmaali karo dhageysi ama asal ahaan fiidiyoow, ciyaar fiidiyoow ama mashruuc kasta oo kale. Tusaalooyinka qaarkood ee codsiyada lagu soo saaro muusikada cusub ee loo maro AI ayaa laga heli karaa, oo lacag la'aan ah, bogagga soo socda.
AKHRISO: Goobaha lagu ciyaaro khadka tooska ah oo laga sameeyo muusig iyo wehel
1) Abuuritaan.fm waa a matoor heesaha asalka ah, aad u fiican in loo isticmaalo nasashada iyo diiradda, oo aan la cayimin. Muusigga ku yaal boggan qofna ma sameyn, laakiin si otomaatig ah ayaa loo soo saaray weligiisna ma dhammaan.
2) Mubert Waa mashruuc horumarineed, oo aad ku tijaabin karto nooc demo ah. Xulo muddada (ugu badnaan 29 daqiiqo) iyo nooca muusikada (Dareenka, Hip-Hop, Elektarooniga, Guriga iyo kuwa kale) ama niyadda , Laga soo bilaabo qoraaga. . Mubert wuxuu samayn karaa muusikada elektarooniga ah waqtiga dhabta ah ee la jaan qaadaya dhadhanka isticmaale kasta, si aan laba qof waligood u dhageysan isla wax.
3) Aiva.ai waa degel aad u isticmaali karto bilaash samee muusig cusub. Markaad abuureyso koonto, waxaad qeexi kartaa qaar ka mid ah xuduudaha sida nooca, muddada, qalabka muusikada, muddada, iyo in ka badan si toos ah loogu abuuro halabuur muusiko cusub oo laga dhagaysan karo khadka tooska ah ama xitaa laga soo dejisan karo. Aiva.ai waa mashruuc dhamaystiran oo khadka tooska ah ah, waa inaad iskudaydaa. Aiva sidoo kale wuxuu leeyahay tifaftiraha baarka si uu u maareeyo muusikada, ugu saxo sidaad jeceshahay, ku dar saamaynta iyo khadadka cusub ee qalabka muusikada. Heerka tifaftiraha wuxuu noqon karaa mid adag haddii aadan khibrad lahayn.
4) Soundraw.io waa goob kale oo bilaash ah oo loogu talagalay abuurista muusig cusub iyadoo la adeegsanayo sirdoon farsameysan. Adoo abuuraya xisaab bilaash ah, waxaad isla markiiba dooran kartaa nooca, niyadda, qalabka, waqtiga, muddada, ka dibna dhagayso raadadka la soo saaray.
5) Ampermusic waa goob kale si loo soo saaro muusig runtii awood badan, laga yaabee midka kuu ogolaanaya inaad ka sii weynaan karto xulashada astaamaha ay tahay in halabuurka cusubi lahaado. Halkan waxaad sidoo kale ka heli kartaa qalabka adoo abuuraya xisaab bilaash ah. Markii aad abuureyso mashruuc cusub si aad u sameysid, kaliya ma qeexi kartid nooca, laakiin sidoo kale waxaad tilmaami kartaa nooc muunad ah oo ka mid ah kuwa la soo jeediyay ka dibna xulo nooca garaacista, qalabka xadhkaha, iwm. heesta cusub.
BONUS: Si loo dhammeeyo maqaalka, waxaa habboon in lagu soo qoro goobta baashaalka. Google Blog Opera, taas oo ka dhigaysa afar dhibic oo midabbo kala duwan leh inay heesaan, mid walibana leh cod Tatar opera ah, mid walbana leh midab kale (bass, tenor, mezzo-soprano and soprano). Codadka waxaa duubay fannaaniin xirfadlayaal ah waxaana loo qaabeyn karaa si ka duwan iyadoo la dhaqaajinayo baro kala duwan, loo jiidayo kor iyo hoos bidix iyo midig. Waqti ka dib, waxaad abuuri kartaa muusikada xafladda kirismaska, nooca aad ku heesato kaniisadda, laga soo bilaabo xoqdo oo u duub si aad ula wadaagto. Adiga oo adeegsanaya furaha Kirismaska ​​waxaad dhagaysan kartaa qaar ka mid ah heesaha kirismaska ​​ee ugu caansan ee ay ku luqluqdaan baraaraha. Habka sirdoonka macmalka ah wuxuu adeegsadaa codadka ay heleen heesayaashu si ay buullaha uga ciyaaraan qoraalada saxda ah isla markaana u abuuraan codadka saxda ah si ay u soo saaraan hees farxad iyo damaashaad leh, iyaga oo waliba heesa.
AKHRISO: 30 barnaamij oo lagu ciyaaro laguna sameeyo muusig Android, iPhone iyo iPad
Sida loo tirtiro cookies-ka ku jira Chrome, Firefox, Edge iyo Safari
SmartBands-ka ugu fiican, dhaqaale ahaan iyo shaqeyn ahaan sida saacad caqli badan
Sida wax looga beddelo fiidiyowga TikTok
Sida loo furo bootloader-ka Xiaomi